म २६ वर्षीया विवाहित महिला हुँ ! मेरो अत्यधिक योनिरस किन आएको होला ? |
म २६ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो र हाम्रो साथमा २ वर्षीया छोरी छिन् । श्रीमान् ६ महिना वर्षदिनको फरकमा घर आउनुहुन्छ । यौन सम्पर्क गर्दा लगभग ३० देखि ४५ मिनेट घंर्षण गर्नुहुन्छ । त्यति बेलामा मेरो योनीबाट लगभग ३ सय मिलिलिटर चिप्लो पानी आउँछ र म अत्यन्तै इमोशनमा हुन्छु तर श्रीमान् भने कति धेरै पानी आउँछ भन्नुहुन्छ । के सबै महिलाको यतिकै मात्रामा योनीरस आउँछ ? अर्को कुरा विवाहअघि मैले ३ जना युवकसँग धेरै पटक यौन सम्पर्क गरेकी थिएँ र हाल श्रीमान् नहुँदा एक विवाहित पुरुषसँग २-३ दिन बिराएर सम्पर्क गर्दै आएकी छु । यो कुरा श्रीमान्लाई थाहा छैन । म उक्त पुरुषसँग भने कहिल्यै सन्तुष्ट हुन्न । उ छिट्टै स्खलित हुन्छ । के मलाई उक्त व्यक्तिबाट यौन रोग सरेको हो ? की यो समस्या ३ महिने सुईका कारण उत्पन्न भएको हो ? मैले जति नै ढाँटे पनि घर गाउँबाट श्रीमान्ले परपुरुषसँगको मेरो सम्बन्ध थाहा पाउनु भएछ र हाल उहाँ शंका मानेर सधंै कण्डम प्रयोग गर्नुहुन्छ । परपुरुषसँगको सम्बन्ध छुटाउने केही उपाय छ ?
अत्यधिक योनिरस किन आएको होला ?
यौन उत्तेजनाको समयमा योनिबाट प्रशस्तमात्रामा रस आउँछ किनभने यसबेला योनि क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा रगतको वहाव हुन्छ । फलस्वरूप योनिको भित्ता रसाएर आउँछ र योनिरस निस्कन्छ । यौनरोग वा अन्य संक्रमणका कारणले आउने योनिरसलाई अस्वाभाविक मानिन्छ । यसरी यौन उत्तेजनाको बेलामा आउने योनिरसको प्रमुख उद्देश्य यौनसम्पर्कमा सहजता ल्याउनुका साथै त्यसलाई सुखमय पार्नु हो ।
यौन उत्तेजनाको बेलामा योनिरस कसरी धेरैमात्रा आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न महिलाको योनिको संरचनाका बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योनि एक नली आकारको एकदमै तन्कन सक्ने तन्तुले बनेको अंग हो । यसको भित्री तह श्लेश्म युक्त हुन्छ । यसको वरिपरि प्रशस्त मात्रामा रक्तनसाहरू हुन्छन् । यौन उत्तेजनाको बेलामा यी रक्तनसाहरूमा रगतको बहाब बढ्छ । अनि विस्तारै रस योनिको भित्ताबाट नै रसाएर आउँछ । सुरुमा यो रस योनिको भित्र तिर मात्र रहे पनि निकै नै निस्किए योनिद्वारभन्दा बाहिर पनि आउन सक्छ ।
योनिरस कति आउँछ भन्ने कुरा यौन उत्तेजनाको स्तरमा भर पर्छ भने कतिपय स्थितीमा यो व्यक्ति अनुसार पनि हुन्छ । पर्याप्त रस नआएर योनि सुख्खा भए यौन सम्पर्क नै पीडादायक बन्छ भने धेरै मात्रामा भए पनि यौन आनन्द प्राप्तिमा कमी ल्याउँछ । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको योनिरसको मात्रा निकै धेरै छ । त्यसलाई तपाईंले कसरी नाप्नुभयो ? कतै नाप्ने कुरामै गल्ती भएको छ कि ? यस विषयमा विस्तृत रूपमा लेख्नुभएको भए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो ।
विवाहेत्तर सम्बन्धले के-कस्ता समस्या ल्याउँछ ?
नेपाली समाज यौनका सम्बन्धमा केही खुला बन्दै गए पनि सामान्यतयाः विवाहेत्तर सम्बन्धलाई समाजले दण्डनीय मान्दै आएको छ । यस्तो दण्ड दिने कुरामा स्थानीय संस्कृति, धर्म, पारिवारिक मूल्य मान्यताअनुसार फरकपर्न सक्ने भए पनि सामान्यतया समाजले यसप्रति प्रदर्शन गर्ने धारणा अनि दण्ड नकारात्मक नै हुन्छ । कतिपय समाजमा त यसलाई अक्षम्य अपराध मानेर कडा सजाय दिइएको पनि पाइन्छ. । यहाँसम्म कि मृत्युदण्डसमेत दिइन्छ ।
नेपालमा त्यति कडा सजाय दिइदैन तर पनि यस्ता सम्बन्धलाई गैर कानुनी वा अनैतिक मानिन्छ । यस्ता सम्बन्धका कुरा खुल्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि अनेकन समस्या, तनाव उत्पन्न गर्छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा पनि समस्या ल्याउँछ । आघात परेको व्यक्तिको क्रोधको सीमा नै रहँदैन । लाजको भावना, उदासीपन, सामना नै गर्न नसकिने शक्तिहीनताको स्थितिमा पुगिने, सिकार बन्न पुगेको स्थिति वा लत्याइएको अनुभव हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा कुनै कुरामा मन केन्दि्रत गर्न गाह्रो हुने, निरन्तर रूपमा घटनाको चिन्ता वा सोच आइरहन्छ अनि कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हुन्छ । तपाईंको श्रीमान्ले तपाईंको परपुरुषसँगको सम्बन्धका बारेमा थाह पाउनु भएको वा शंका गर्नुभएको छ भने पक्कै नै यी कुराबाट गुज्रनु भएको हुनुपर्छ ।
किन विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध राखिन्छ ?
कडा सामाजिक बन्देज हुँदाहुँदै पनि किन विवाहेत्तर सम्बन्ध राखिन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन सजिलो छैन । फरक फरक स्थितिमा हुर्किएका दुई व्यक्ति साथसाथै बस्न धेरै कुरामा तालमेल मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि एकअर्कामा सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु अझ गाह्रो छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध आकस्मिक दुर्घटना वा सांयोगिक घटनाका रूपमा आउन सक्छ भने अर्को थरी प्रणयपूर्ण सम्बन्धका साथै हुने विवाहेत्तर सम्बन्ध । शायद बलियो र सक्षम वंशाणुलाई सन्तानमा सार्ने जै विक वा प्राकृतिक आवश्यकता हुनसक्छ ।
कतिपय स्थितिमा यो अन्तरनिहित समस्याको एक लक्षण मात्र हुनसक्छ । एकै व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा सन्तोष प्राप्त गर्न नसक्नु, सम्बन्ध प्रेममय रहन नसक्नु, प्रेमयुक्त सम्बन्धमा बाँधिन चाहनु, भावनात्मक प्रगाढतामा बाँच्न चाहनु जस्ता कुराले कुनै नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रेरित गरिरहेको हुनसक्छ ।
दम्पत्तीले एकअर्काको भावनालाई सम्मान नगर्नु, बेवास्ता गरिएको अनुभूति हुनु, यौन नैराश्यताले ग्रसित हुनु, साथै बस्ने चाहना नहुनु, भावनात्मक अन्तरङ सम्बन्ध नहुनुजस्ता कुराले वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिरको सम्बन्ध स्थापनातर्फ डोर्यानउँछ । तपाईंले किन अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नुभएको हो भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट छैन ।
सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन
यस्ता समस्याको समाधान भने सजिलो छैन । कतिपयले त एकपल्ट धोखा खाइसके पछि त्यसलाई सुमधुर बनाउन नसकिने र सम्बन्धलाई टुंग्याउनु पर्ने विचार राख्छन् भने अर्का थरीले यस प्रकारका घटना घटी हाले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तिर लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । सम्बन्ध सुमधुर बनाउन दम्पत्तीलाई नै परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ र परामर्शदाताको सहयोगमा दुवैले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाहेत्तर सम्बन्धको समाचार कसरी खुल्दै -थाहा हुँदै) गएको छ भन्ने कुरामा आघात परेको अर्थात् चोट खाने व्यक्तिको प्रतिक्रियामा निर्भर हुन्छ ।
यो जानकारी जसरी नै खुलेको भए पनि विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति र चोटखाने व्यक्ति दुवैको मानसिक स्थिति सामान्यभन्दा फरक हुन्छ । तनाव अनि चिन्ता उच्चतम बिन्दुमा हुनसक्छ र त्यसले संकटावस्थाको सिर्जना गरेको हुनसक्छ । चोट खाएको व्यक्ति र विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति माझको सम्बन्धलाई यदि सुमधुर बनाइ राख्ने हो भने मोटामोटी रूपमा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ— -क) संघातको सामना गर्ने,(ख) परिप्रेक्ष्यलाई केलाउने र त्यसलाई अथ्र्याउने अनि -ग) सम्बन्धलाई अघि बढाउने । तपाईं आफूले विवाहेत्तर सम्पर्क राखेको सन्दर्भमा श्रीमान्सँग सम्बन्ध सुधार्न तपाईंको थप दायित्व हुन्छ ।